Maitiro Ekubvisa Kubvisa Anoshanda
Induction stripping ndeye inopisa pamusoro pegadziriro maitiro Iyo induction jenareta inotumira inochinjika yazvino kuburikidza neiyo induction coil, iyo inogadzira iyo electromagnetic munda. Iyi munda inokonzeresa mafashama anoshandurwa kuita kupisa mukubata nekuitisa zvinhu simbi. Iko kupisa kunoitwa pasi pekupfekedza, zvichikonzera kupfeka kuti ikurumidze kukurumidza. Iyi nzira inokodzera kurapa nzvimbo dzakatsetseka kana dzakakomberedzwa panzvimbo yebasa uye haidi chero kuvharirwa.
Iyo induction inobvisa sisitimu inobvisa pendi, kumwe kupfeka, ngura inorema, bhakitiriya ngura uye mafuta uye mafuta emagetsi anoitisa nzvimbo (ferromagnetic simbi) ichipwanya kubatana kwehukama pakati pezvinhu uye iyo substrate etch masara, induction kupisa inzvimbo uye inodzorwa iyo inoshandisa mashoma simba.
Categories Technologies Tags kudziyisa induction yekupfeka kubviswa, induction kupfekedza kupfekenura, kuburitsa kupisa kupisa, kubviswa kwepende kubviswa, induction pendi inobvisa, induction PRP system, kupinza RPR system, induction ngura kubviswa, induction ngura inobvisa, kubvisira kubvambura, induction kubvisa system, RPR Post navigation